mpianatra eny amin’ny bloc resto Ankatso I manoloana ny olana amin’ny famatsiana rano fisotro madio sedrain’izy ireo. Roa bidon isan’andro isan’olona mantsy no mba azon’izy ireo, ilaharana manomboka amin’ny 01 ora ka hatramin’ny roa ora maraina ihany fotoana tokony hatoriana, hany ka izy samy mpianatra indray no mifandramatra. Mila midio anefa izahay, hoy ny solontenan’izy ireo, mila misakafo ara-pahasalamana ihany koa sady mila mahandro ka takianay ny hijerena izany tsy misy hatak’andro. Nisy moa ny hetsika izay notanterahin’izy ireo teny an-toerana ny sabotsy teo nilolohavany seau sy namoahany ireo bidon miloko mavo tao an-tanàna rehetra narahin’ny siotsioka ho fanairana ny fitondram-panjakana. Efa am-bolana moa no niharetan’izy ireo izany, hoy hatrany ny vaovao.